Arsenal oo si layaab leh ugu dhaqaaqaysa difaaca kooxda Tottenham ee Toby Alderweireld – Gool FM
(London) 14 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinayaa inay u dhaqaaqayso soo xero gelinta difaacana naadiga Spurs ee Alderweireld.
Wargeyska The Sun ayaa daabacay in Gunners ay si layaab leh dalab uga gudbinayso xagaagan daafaca ka tirsan kooxda ay ku xafiiltamaan Magaalada London ee Tottenham.
Xiddigan reer Belgium ayaa beeca xorta ah kaga tagaya Spurs, waxaana kooxdii doonaysa laga rabaa inay bixiso lacagaha lagu burburin karo qandaraaskiisa oo dhan 25 milyan oo gini oo u dhiganta 33 milyan oo dollar.
Haddii ay dhacdo in Alderweireld uu u dhaqaaqo Arsenal, waxa uu qaadi doonaa tallaabo la mid ah midii Sol Campbell, kaasoo ka soo tagay garoonka White Hart Lane, isla markaana ku biiray kooxda ka dhisan Waqooyiga Magaalada London ee Gunners.
Difaacan ayaa sidoo kale muddo dheer bartilmaameed u ahaa kooxda Manchester United.
Shaxda rasmiga ee kooxaha Liverpool iyo Chelsea oo lagu dhawaaqay... (Yaa ku soo bilowday kulanka ka dhacaya Anfield?)
“Atletico way ixtiraamtaa Real Madrid, laakiin kama baqeyso iyaga.” – Koke